ကျပ် ၅သိန်းတန် GSM တယ်လီဖုန်းငှားရမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျပ် ၅သိန်းတန် GSM တယ်လီဖုန်းငှားရမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍
ကျပ် ၅သိန်းတန် GSM တယ်လီဖုန်းငှားရမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍
Posted by intro on Feb 1, 2011 in Creative Writing, Myanma News, News, Opinions & Discussion, Society & Lifestyle | 11 comments
ဒီနေ့မနက်က အင်တာနက်ဂျာနယ်မှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်… GSM ဖုန်းများ ၅သိန်းနဲ့ ချထားပေးနေပြီတဲ့… ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးမြို့တွေအတွက် အလုံးရေ ၂သိန်းကျော် ချပေးတော့မယ်လို့ပြောပါတယ်… ပြီးတော့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခက တစ်မိနစ်ကို ၅၀ ကျပ်ပါတဲ့… ဖုန်းတွေကို ကြိုတင်ငွေပေးချေကဒ်တွေ သုံးပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်… အင်တာနက်လဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်… ဖုန်းနံပါတ်တွေက 0941 ကစပြီး ဂဏာန်း ၉လုံး ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့လဲ သိရပါတယ်… ဇန်န၀ါရီလ ၃၁ ရက်နေ့က စတင် ချထားပေးခြင်းလဲ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်…
အဲသည့်တော့ တစ်ချို့ GSM သမားတွေက ညည်းနေကြပါတယ်… GSM ဖုန်းသုံးစွဲသူအများစုမှာ မြန်မာကျပ်ငွေ ၁၅သိန်းကျော် ပေးသွင်းပြီး သုံးစွဲခွင့်ရထားတာဖြစ်ပါတယ်… ပြီးတော့ CDMA သမားတွေကလဲ ညည်းငြူသံ သဲ့သဲ့ကြားနေရပါတယ်… ယနေ့ လက်ဖက်ရည် ဆိုင်တွေမှာလဲ အဲသည့် သတင်းဟာ တောရက်စ် ချဲလ်ဆီးကို ပေါင် သန်း ၅၀နဲ့ ပြောင်းတဲ့ သတင်းထက် ပိုပြီး ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်နေကြပါတယ်…
တစ်လောက GSM ဖုန်းပျောက်သွားတဲ့ အစ်ကိုတစ်ယောက်ကလဲ သူ့ sim ကဒ်ကို တစ်လအတွင်း ပြန်ရအောင် လုပ်ပေးဖို့ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးကို ၃သိန်း (ကဒ်ဖိုး ၁သိန်း၂သောင်း + ၀န်ဆောင်ခ) ပေးလိုက်ရတာ မတန်ဘူးလို့လဲ ပြောနေပါတယ်… အိမ်မှာ ရှိတဲ့ အဒေါ်ကလဲ သူ့ GSM ကို ၀ယ်တုန်းက ၂၂သိန်းပေးဝယ်ခဲ့ရတဲ့အတွက် အင်မတန် နှမျောတသ ဖြစ်မိကြောင်း ပြောနေပါတယ်…
ဒီ့အပြင် ဒီလို ဖုန်းအသစ်တွေ ချပေးနေတာကြောင့် ဆက်သွယ်ရေးမှ ၀န်ထမ်းများ အထူးဝင်ငွေဖြောင့် နေကြောင်းလဲ သိရှိရပါတယ်… ဖုန်းတစ်လုံးအတွက် ၀န်ဆောင်စရိတ်ကို ပျမ်းမျှ တစ်သောင်းကျပ်ခန့် (တရားဝင်မဟုတ်) ရရှိတဲ့ အတွက် တစ်နေ့ကို ကျပ်သိန်းဂဏာန်းထိအောင် ၀င်ငွေကောင်းနေကြောင်းကိုလဲ သက်ဆိုင်ရာ ၀န်းကျင်မှ ပြန်လည် ကြားသိရပါတယ်….
ဟီးးးးးးးးး ကျတော်တို့ အေးတာဘဲ ဘယ်ဖုန်းမှမရှိဘူး မကောင်းဘူးလား။(မဝယ်နိုင်သေးလို့ပါ)
ဖုန်းကိစ္စကတော့ စိတ်ပျက်စရာတော်တော်ကောင်းတယ် …. အင်တာနက်ကို cdma 800 နဲ့ပဲ သုံးလို့ရမယ်ဆိုလို့ အဲဒါကို ၀ယ်လိုက်ရတယ် … ၀ယ်ပြီးတော့ အင်တာနက်ကဒ်အတွက် သုံးသောင်းပေးပြီးလဲရတယ် … ပြီးတော့ handset က သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အမျိုးအစားနဲနဲလေးပဲရလို့ handset ရှိပြီးသားပေမယ့် အသစ်ထပ်ဝယ်လိုက်ရတယ် … ပြီးတော့ အဲဒီ handset နဲ့ ကွန်ပျူတာကို အင်တာနက်ချိတ်ဖို့ install လုပ်ခဆိုပြီး ၅၀၀၀ ကျပ် ထပ်ပေးရသေးတယ် ..
အားလုံးပြီးတော့လဲ အင်တာနက်လိုင်းက လိပ်နှုန်းနဲ့ပဲ ရတယ် ..
အခုကျတော့ ၅ သိန်းတန် GSM တဲ့ …
သူတို့ရဲ့ လုပ်ချက်တွေက ပင်လယ်ရေလှိုင်းလို..တစ်လုံးပီး တစ်လုံး…
ကိုရွှေကြီး အကွက်ရွေ့ ချက်က9လောက်ရှိတယ်
(အကောင်းဘက်ကကြည်ရင်) ဖုန်းမရှိသေးတဲ့ လူတွေအတွက်ကတော့ ကောင်းတာပေါ့
လုပ်ပေါ့ဗျာ ကျနော် ကိုက နုံပြီး အကွက်ထဲဝင်ခဲ့မိတာကို
ဖုန်းဓျေး ၅၀၀၀၀ လောက်ဆိုရင်တော့ ၀ယ်နိုင်မယ်နဲ့တူုပါရဲ့။
အရူးတွေ ဆယ့်နှစ်မျိုးဟင်းချိုလုပ်နေတယ် ။ နောက်ဆုံး ဆက်သွယ်ရေးကလူတွေပဲ အောက်ဆိုက်ရကုန်တာ ။
if someone know about future news for GSM, please post more details.
Above Amyarthar said absolutely right
သုံးသိန်းတန်ဖုန်းတောင် ထပ်ချပေးမယ်ပြောနေတော့ စိတ်ရှည်ပြည်စိုး ဖို့တော့လိုမယ်ထင်တယ်…ဟင်းးးးးး
သုံးသိန်းတန် မပြောနဲ့ တစ်သိန်းတန်တောင် ချပေးဖို့ကောင်းတာ၊ လူတိုင်းစေ့ ကိုင်နိုင်ရင် ပိုပြီး မကောင်းပေဘူးလား ဗျာ…
နယ်က လာတဲ့ အသိ တယောက် ပြောတာ ဆိုရင် သူတို့ နယ်မှာ ဖုန်းတွေ ချပေးတယ် ဆိုလို့ပြီး ဖုန်းတွေ ၀ယ်ကိုင်ကြတယ် မလုပ်တတ် လုပ်တတ်နဲ့ ဆိုတော့ ဖုန်း ကိစ္စ တော်တော် ပြသနာ များတယ် ဆိုဘဲ။ ဖုန်း အရူးတော့ တော်တော် ထ နေကြတယ်။